Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite - June 3 - site blog - jluis37.com
Ndi-mo-ozi UFC – Jairzinho Rozenstruik vs August Sakai
“Bigi Boy” enweela oke oge un siri iken’oge afọ gara aga na ọkara. Ọnwụ doro anya na onye mmeri dị ugbu a t Stake Brand Ambassador, Francis Ngannou na Machị sochiri mmeri TKO megide Junior Dos Santos. Mana mkpebi mkpebi Ciryl Gane na February afọ a mere ka ọ ghara inwe olile anya nke isi gbaa. Izu ụka that a bụ ohere iji lụ ọgụ (mgbapụta). Jairzinho nwere otu ihe egwu kacha egbu egbu na mpaghara niile nke oke na megide ọtụtụ ndị agha, ị ga-akwado ya. Augusto Sakai abụghị onye ọgụ ọ bụla. Iguzo naanị 2cm dị mkpụmkpụ karịa onye agha Surinamese, onye Brazil agaghị atụ ụjọ isi Jairzinho. Anyị na-echen’agbanyeghị nke a,”Bigi Boy” ga-enwe uru na iru nke ga-egosi mkpebi, ma website Id mkpebi ma ọ bụ mmalite knockout. 1 nkeji.
Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks – Onye mmeri – Milwaukee Bucks @ 2.44
Bucks, nke na-achị MVP Giannis Antetokounmpo nke na-achị azụ, bụ ezigbo arọ underdogs ebe a. Nke a bụn’ezien’ihi ikekwe nnukwu asị 3 kacha njọ na NBA – Harden, Durant, na Kyrie. Egwuregwu siri ike maka mmejọ, Kyrie bụ diva, na njirimara KD bụ ihe karịrị nkwenye, ya mere ọ nwere ike isiri ndị na-agba ilu na ụwa ike ịhụ ka ha na-achị. Ndị ụgbụ ahụ zigara ndị otu Celtics obi ebere nke ọma website Id Gentleman’s un mana, mana enwere nnukwu ọdịiche dịn’etiti ha na Bucks. Ndi Bucks, ndi lere anya na Nets website t elu nke nguzo rue otutu otutu ugbua, kpochapuru ndi nzuko ndi ozo nke ugbua, ma nwee otun’ime ihe ndi kachasi ike, nke di omimi, ma di nma nke oma. Bucks bụ otun’ime ìgwè ndị siri ike na-agbachitere gburugburu, nke ga-etinye han’ọnọdụ dị mma iji gbochie mwakpo ọjọọ website Id Nets. Nweghị ike ịgbachi ụgbụ, mana ha agaghị emechi onye ọ bụla, yana nchekwa ha. Yabụ, ọ bụrụ na Bucks nwere ike ịkwụsị juggernaut ahụ na-ewe iwe miniature nweta ọnụọgụ agbapụ nke ọtụtụ ndị otu ha, ha kwesịrị ịgafe ma have been otu ụzọ 1-0 na usoro ahụ. 1 Nkeji
Portland Trail Blazers na Denver Nuggets – Handicap – Portland Trail Blazers -5.5 @ 1.98
Chei, olee etu egwuregwu 5 si dị mma? Egwuregwu iri abụọ nke OT, nke hụrụ Damian Lillard ka ọ tụbara 55 isi na ihe kachasị mma. Na mmechi, Dame enweghị ike ime ihe ọ bụla. Ndị otu ya, ị nwere ike ịsị, hapụ ya ala karịsịa na oge nke abụọ nke OT. Jusuf Nurkic ịbụ onye e mejọrọ enyeghịkwa aka, n’ezie. Mgbe m meriri egwuregwu 4n’ụlọ mara mma nke ọma, ana m akwado Dame ịnwekwu ọkụ d e afọ, yana arụmọrụ ka mma website Id ndị otu ya ịtọlite ​​egwuregwu 7n’etiti otu abụọ nwere ike ịzọ ọgụ maka afọ. A obere nkwarụ na ụfọdụ mara mma uru looms anyị tipsters. 1 nkeji.
Ememe Ncheta Ememe Ncheta 2021 – shirt 20 – Shane Lowry @ 2.75
Lowry bịarutere na Obodo Muirfieldn’izu a website na PGA Championship na-agbawa agbawa, nke hụrụ un ka ọ gwụchaa ebe nke anọ un t nsochi mmechi nke 69. Agbanyeghị ụdị that a malitere mgbe ọ gwụchara nke asatọ na Sawgrass na Machị adorable hụ un ka ọ na-eme isii ọrịa strok na-etinye iri ọzọ na Heritage iji soro ebe nke anọ na Kiawah Island. Ike nke egwuregwu Lowryn’oge a esitewo t esitewo gaa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dịka ọ nọ ugbu a na 22nd na ngalaba a, ọ bụ ezie na ọ nọn’ọnọdụ 26th gburugburu elu, nke abụọ bụ isi chọrọ na usoro Jack Nicklaus a haziri. Ifufe, nke nwere ike bụrụ ihe dị ebe a na-egosi d e ọ ga-arụkwa akụkụ, ka ụbọchị anọ niile na-egosi ikike gusts 15-20mph pụtara Spacious onye mmeri bụn’ezie nwoke zuru oke ịnwen’akụkụ gị. O gosipụtabeghị ọchịchọ un ime otu egwuregwu Ryder Cup na Septemba – un t ọchịchọ ya, ụdị na nso nso a na nwoke na-ebuli egwuregwu ya maka nnukwu ihe omume, enwere ọtụtụ ihe kpatara ọ ga – eji chee na ọ ga – eme ka ọ dịkwuo elu. 1.5 nkeji.
LA Lakers vs Phoenix Suns – Suns karịrị 102.5 @ 1.77
N’ime usoro egwuregwu niile na ndị Lakers, Suns agafeela ihe 102.5 naanị otu ugboro na nke ahụ dị na egwuregwu 5 ebe ha duuru ihe dịka 37 isi miniature gwụchaa 115-85. Na egwuregwu 4 mbụ, akara ha kachasị elu bụ 102 nke only t Game two. Kedu ihe dị iche na egwuregwu 5 t egwuregwu 4 mbụ? Ọ bụghị onye ọzọ karịa ọnụnọ Anthony Davis. AD anọghị t egwuregwu 5n’ihi mmerụ ahụ merụrụ na egwuregwu 4, ọ nwere ike igwu egwu na egwuregwu 6 mana ọ siri ike ichen’echiche na ọ na-eme ihe na 100%. Na AD ka na-enyo enyo maka egwuregwu 6 d e Suns ọhụrụ hụrụ obi ike, ana m atụ anya na Phoenix Suns gafere 102.5 website Id njedebe nke egwuregwu ahụ. 1 nkeji.
Beljim ga-ebido nkwadebe nke European Championship website t ị nabata Gris. Agbanyeghi na isi ruon’isi na-ekewapụsị, un t mmeri atọn’otun’otu na atọ na-adọta na nzute ha itoolu, ndị otu egwuregwu bọọlụ mba abụọ a agaraghị enwe nnukwu ọdịichen’ọnwa iri na abụọ gara aga. Belgium mecharan’isi nke ndị tozuru oken’asọmpi Euro Championship ha website Id mmeri iri kwụ ọtọ (ya na naanị intali na Group J ndị otu ọzọ jikwaa nke a) miniature merie ihe mgbaru ọsọ iri anọ, nyere ha atọ. N’aka nke ọzọ, Gris enwetabeghị eru maka nke Euro, website Id ngosipụta jọgburu onwe ya nke only ka ha merie naanị otun’ime asọmpi asaa mbụ ha tupu oge ngwụcha oge hụrụ na ha mechara nke atọn’ime otu ahụ, isi anọ dịn’azụ Finland. Belgium na-abanye na Euro dị ka otun’ime ọkacha mmasị ịgan’ihu ma merie ya, yana ndị otu na-etu ọnụ dịka Kevin De Bruyne, Eden Hazard na Romelu Lukakun’etiti ndị ọzọ ọ na-esiri ike ichen’echiche dị ebe Gris si enweta ihe ọ bụlan’egwuregwu a. Ndị Beljọm ga-achọ ịchikọta ike ha t Closing na asọmpi anọ ha nweren’ụlọ ha meriri England, Denmark na Wales website Id goolu abụọ tupu ha ebibie Belarus 8-0 oge ikpeazụ. Belgium -1 t disability na-akwụ 2.09. Dejupụta akpụkpọ ụkwụ gị. Nkeji 2.
Spain na Portugal – 1 × two – Portugal @ 3.00
Oge Spain abịawo ma gafee dị ka nnukwu ike nke European soccer. O doro anya na ha ka na-etu ọnụ maka otu ndị agha dị ọtụtụ d e ndị gbara ha gburugburu, mana ha dị ogologo website Id njedebe nke njedebe 2000s / mmalite 2010s – otu ndị meriri Euro na 2008 na 2012 na mgbakwunye na 2010 World Iko. Nke a bụ ọgbọ na-eto eto nke ọgbọ ọhụụ gbadoro. Ndị ochie dịka Sergio Ramos, David Silva, Casillas na Iniesta agala, ndị agha ọhụụ miniature dochie ha. Spain ka ejiri onyinye, ma a na-emeso Portugal n’ụzọ na-ezighi ezi dị ka ndị si mba ọzọ ebe a. Nke a bụ otu ndị meriri n’asọmpi Euro kachasị ọhụrụ na 2016, na ndị otu ha agabigagola naanị kemgbe. Ha ka na-etu ọnụ mgbe niile Cristiano Ronaldon’akụkụ ndị gburu egwuregwu dị egwu na-anọghị d e asọmpi ikpeazụ; dị ka Ruben Dias iji mee ka nchebe ha sikwuo ike, Bruno Fernandes iji dọpụta ụdọ na-agan’ihu na Bernardo Silva na Joao Felix iji nyere Cristiano Ronaldo aka ọgụ. Nke a bụ,n’akwụkwọ, otu kachasị ike karịa nke meririn’asọmpi kachasị nso a. Nke a bụ naanị enyi na enyi, mana anyị na-atụ anya na Portugal ga-egosipụta ike megide ezigbo ngalaba Spanish ma have been obere ọsọ ọsọ na asọmpi Euro 2021. Ọnụahịa dị na 3.05 dị ka okpuru bụ ihe mere anyị ji nwee mmasị ebe a – ọ bụ nnukwu ibu ileghara anya. 1 nkeji.
Isi izu that an’izu that a siteren’aka JacksonPalmer bụ onye họpụtara ihe ndị a.
Vstali na Czech Republic – 1tali 1 × 2 @ 1.65
Aretali nọn’ọnọdụ dị oke mma dịka ha jiri mpempe akwụkwọ dị ọcha merie egwuregwu ise ha gara aga, ebe Czech Republic merie 3n’ime egwuregwu ise gara aga, merie Wales na otu ihe na Belgium na egwuregwu two ikpeazụ ha. Isi ikpeazụ ruo n’isi nzukọ n’etiti akụkụ na 2013 kwụsịrị na winningtali na-emeri. Ha meriri egwuregwu ahụ 2-1. Oge ikpeazụ Czech meriri Italytali bụ na 2002. Echere m totali ga-emeri egwuregwu a.
Otutu nsogbu – 351.01 *
Ọ bụrụ nhọpụta izu that a na-amasị gị, detuo website Id egwuregwu: 10679392. Kachasị mma n’izu ụka a!